Igbe Achịkọta Mpempe Ejiri Ejiri-igbe Mpempe Ihe Mgbakwunye Ime Nkwado-BAM.
>lọ>ngwaahịa>Igbe nchekwa Magableic
Igbe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Igbe mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe
ihe: 2.00mm chipboard ọkpụrụkpụ kpuchie bọọdụ nka C1S
Emechi Décor: CMYK agba na-ebi akwụkwọ Ribbon
Jiri igbe akwa na-adị jikọtara ọnụ mee ihe iji nye onyinye dị ebube na nke dị nro na akwa akwa. Ezubere igbe igbe a na mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ iji wee hụ na akwa ahụ na-adị ọhụụ. Mgbe ị na-ejighi, ị nwere ike dobe ya site na ịtọghe igbe nkwakọ ngwaahịa akwa. Ọ gaghị ewe ọtụtụ ohere. Nwere ike idobe ya n'okpuru uwe gị ma ọ bụ onyinye n'onwe ya. Blackcha ojii na rịbọn pink na-eme ka ngwakọta dị egwu. E kwesịrị ịhụ ihe igbe a mara mma.
Nwekwara ike iji igbe textiiki ndị a na-agbakọta agbakọ iji chekwaa blanket na quilts gị mgbe ị na-ejighị ya. Igbe a ga-echekwa ha ma dị ọhụụ. A na-ahazigharị igbe ahụ. Can nwere ike ịrịọ maka ogo kachasị amasị gị na otu anyị ga-eme ka o kwe omume n'oge. Igbe a mara mma ma sie ike bụ naanị ihe ị ga - eme iji mee ka ndị nkasi obi gị na nkụ gị ghara iru ure ma were ya gosi ndị ị hụrụ n'anya ihunanya n'ime igbe ndị a.
- Akwa Box
- Igbe ịzụ ahịa Akwa
- Igbe Garment
- Igbe uwe
- Igbe akwa
- Igbe olu
- Igbe ọla
Mpempe akwụkwọ Ntọala na Lzọ Ahịrị
Ngwakọta zuru oke nke ịma mma na ike, igbe akwa a na-agbanwe agbanwe bụ naanị ihe ịchọrọ iji kechie akwa na blanket ma nye ya ndị ị hụrụ n'anya. Ihe chipboard eji eme igbe ndia n’eme ka ọ di anya ma nwekwaa ihe nkenke na eme ka o kwe omume ichekwa igbe ahu mgbe ejighi ya. Blackcha ojii nke nwere ihe mmecha amara bụ ezigbo njiri. Nwere ike iji igbe ndị a maka nchekwa. A igbe ojiji iji ọtụtụ ọrụ iji mee ka ọrụ gị dị mfe ma na-atọ ụtọ. Ribbon na-agbakwunye ya mara mma. Kpuchie blanket ahụ na mpe mpe akwa maka iburu nchekwa.
Igbe mpempe akwụkwọ igbe nchekwa